Taombaovao Tao Bangladesh Nisehoan’ny LGBT Tamin’ny Lokon’ny Avana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2014 3:42 GMT
Nanao filaharambe tanatin'ny Lanonan'ny Taom-baovaon'ny firenena vao haingana ireo mpikambana avy ao amin'ny fikambanana LGBT (Lesbiana, pelaka, sady lahy no vavy ary ireo niova taovam-pananahana), dingana feno fahasahiana hoan'ireo vitsy an'isa matetika atao tsinotsinona.
Ny Roopbaan, gazetiboky natokana hoan'ireo pelaka ao Bangladesh, no nikarakara ny diabe miravaka loko, izay nohizingizinin'izy ireo fa tsy diaben'ny fireharehan'ny pelaka fa fankalazana ny fahasamihafana sy ny finamanana. Hoan'ireo miozolomana maro an'isa ao Bangladesh, sokajiana ho tsy azo ekena ara-piarahamonina sy ara-pivavahana ny fahapelahana. Tsy ara-dalàna ny fahapelahana, araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena.
Tamin'ny 14 Aprily, Taom-baovao Bengali, niainga tao amin'ny trano fanorenan'ny Sampana Hay Zavakanton'ny Oniversiten'i Dhaka ny filaharana maroloko nentim-paharazana ” Mongol Shobhajatra “. Narahin'ireo vondron'olona mitafy loko avana misolotena ny fikambanana pelaka ambanin'ny tany avy hatrany izany avy eo. Tsy nahafantatra izay zava-nisy ireo olona manodidina azy ireo, saingy fotoana fohy taty aoriana vao fantatr'izy ireo tamin'ny alalan'ny vaovao tamin'ny haino aman-jery fa hoan'ny fikambanan'ny mpitia mitovy taovam-pananahana ilay diabe. Araka ny tatitra avy amin'ny vavahady antserasera Priyo.com (eto ny dikantsoratry ny lahatsoratra tamin'izany):
Nahitana filaharana fito mirazotra misy ireo mpikatroka mitafy punjabi [karazan'akanjo] miloko ny tsirairay amin'ny loko mandravaka avana ny diabe. Nitondra balaonina, voninkazo, sy vorona taratasy izy ireo. Natsipin'izy ireo teny amin'ny lanitra ireo balaonina rehefa nifarana ny diabe. Nahaliana ny vahoaka ity diaben'ny fahasamihafana ity.
Aparitaho ny fitiavana, fa tsy ny fankahalàna. Sary tao amin'ny vondrona Facebook, Roopbaan. Spread love, not hatred. Image courtesy Roopbaan Facebook group
Bilaogy momba ny zon'ny LGBT The Muslim Outcast nanamarika hoe:
Na manohana ny LGBT ianao na manohitra azy, tsy afaka hanampy ianao fa mijery. Hoan'ireo vondron'olona noharatsiratsiana mikiry mijoro sy mandeha eny an-dalamben'i Dhaka, kanefa mahafantatra tsara fa mety ahitàn-doza izany, dia fihetsika feno herim-po mendrika izany. Lalana lava ho amin'ny fanekena azy ireo no nanombohan'izy ireo ny tolona ary hotsaroan'ireo taranaka LGBT any aoriana ireto olona mahagaga ireto izay anisan'ireo nametraka ny fototry ny fanekena azy eo anivon'ny fiarahamonina ao amin'ny firenena.
Nahasarika fanehoan-kevitra marobe tao amin'ny media sosialy ny filaharambe, indrindra tao amin'ny Facebook. Tsy mankasitraka ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra, na dia nisy ihany aza ireo sasany nidera ny ezaka. Nitanisa ny sasany tamin'izy ireo ny vondrona Facebook Gay For Girls (Pelaka hoan'ny Vehivavy) ary nijery:
Ny antony tokana nandaniako ny fotoanako naka pikantsary tamin'ireo fanehoan-kevitra sy nametraka izany eto dia ny mba hanaporofo zavatra iray. Hiteny ratsy ny olona mba handratra ny hafa fotsiny. Hilaza zavatra maharikoriko amin'ny olona izay tsy fantany akory. Hankahala anay izy ireo na dia tsy mahafantatra akory ny tantaranay aza.
Nanoratra tao amin'ny Twitter mikasika ny fandrahonana taorian'ny diabe i Rainer Ebert, mpikatroka Amerikana monina ao Dhaka, :
Pejy Facebook #Roopbaan, fandrahonana herisetra atao amin'ireo olona #LGBT sy ny namany taorian'ny diaben'ny fireharehana voalohany tao Bangladesh
Bilaogin'ny LGBT am-pielezana Bangla “Coming out” as a bisexual Bangladeshi nanangona ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra. Hoy ny mpisera iray nanoratra, “nanam-bitana izy ireo fa azo isaina amin'ny rantsa-tanana no nahafantatra .. Amin'ny manaraka mety hisy olona hanambara mialoha ary ho voadaroky ny baomba.”
Ny hafa naneho hevitra miaraka amin'ny fandrahonana herisetra, fampitahàna amin'ny biby, mpidoroka rongony, mpanolana zaza sy ny zanaka ao an-tranony ihany, fanamarihana ny fady ara-pivavahana sy fanomezan-tsiny ny governemanta.
Na dia izany aza, nisy ny tsirim-panantenana tamin'ireo fanehoan-kevitra sasany:
Iza isika no mitsara raha tsara izany na ratsy, ary nahoana no miahiahy fatratra izany ny tsirairay
Nahoana ianareo no mankahala mafy azy ireo manokana?
Hoy ilay bilaogera namehy:
Tsy mankasitraka avokoa ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra. Andeha hatrehana izany, fantantsika fa tsy maintsy hiseho izany. Ankoatra ireo angona fanehoan-kevitra mamelively voalaza teo ambony, marobe ihany koa ireo fanehoan-kevitra tsy mankasitraka tsy misy mpitia (tsy nahazo “like”) izay tsy navoakako eto. Saingy misy fanehoan-kevitra tsara vitsy mpankasitraka ao anelanelanin'izany, ary koa misy ireo fanehoan-kevitra mankasitraka vitsivitsy be mpitia (be mpanao “like”). Ary izany no manome fanantenana ho ahy.